Sida loo xiro diiradda iyo soo-gaadhista otomaatiga ah ee kamaradda iPhone | Wararka IPhone
Dhamaan taleefannada iPhone
Barnaamijyada iyo cayaaraha
Sida loo xiro Diirada iyo Gawaarida Gawaarida ee Camera-ka iPhone
Paul Aparicio | | Casharrada iyo buugaagta
Kaamirada iPhone-ka ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka, sida daraasadaha qaar ay sheegaan, sida midkii bishii Janaayo ee la soo dhaafay oo la sheegay in kaamiradda iPhone 5 ay dhaaftay Nixon caan ka ah Flickr, oo ah adeegga sawir qaadista. Ma aha mid ka mid ah kuwa ugu caansan maxaa yeelay waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican dhammaan, maya. The Kaamirada iPhone-ka ayaa had iyo jeer laga doorbiday dadka isticmaala sababtoo ah sida ay u fududahay in la isticmaalo iyo sababta oo ah waa kamarad aad u fara badan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan qaadno darbooyin wanaagsan anagoon waxba ka ogeyn wax ku saabsan sawir qaadashada xaalad kasta oo jirta.
Xitaa sidaas oo ay tahay, weli waxaa jira xoogaa waafajin ah oo aan ka baxsan karno, sida kiiska diirada otomaatiga iyo qufulka gaadhista. Mararka qaarkood, waxaan doorbidi karnaa in iPhone uusan isagu go'aan ka gaarin laftiisa barta la saarayo iyo inta iftiin ah ee la ururinayo. Tusaale ahaan, sawir koox ah oo laga qaado meel aan aad uga fogeyn iyo halka aysan kooxdu ka joogsan dhaqdhaqaaqa. Waa suurtagal in xaaladaas iPhone uusan garaneynin meesha diirada la saarayo, marka waa inaan nafteena ku tilmaanaa. Waa nidaam fudud, sida aad hoos ku arki karto.
Tan awgeed waa inaan xannibnaa AE (Ingiriisiga, Iskudhicii otomaatigga ah) iyo AF (Ingiriisiga, Feejignaanta otomaatiga). AE wuu hagaajiyaa xaddiga nalka galaya dareemaha iyo AF si fudud waxay ka hortagtaa diiradda inay go'aamiso kaligeed meesha lagu hagaajinayo. Labada arrimoodba waa la xannibay isla waqtigaas waana inaan taas yeelnaa oo keliya Dooro barta aan dooneyno inaan xoogga saarno / uruurino nalka oo aan riixno wax ka badan hal ilbiriqsi. Waxaan arki doonaa in fagaaraha uu ka dhigayo labo boodbood iyo calanka QODOBKA AE / AF.
Marka qufulka horey u shaqeynayo, ma dhaqaaqi doono xitaa haddii aan dhaqaajinno iPhone-ka. Dhinaca midig ee fagaaraha waxaan ku arki doonnaa a xariiq toosan oo qorrax leh oo loo adeegsado in wax looga beddelo ISO, taas oo tilmaamaysa xaddiga iftiinka kamaraddeennu u baahan tahay si ay sawir u qaaddo. Si wax looga beddelo qiimahan, kaliya fartaada kor ama hoos u mari shaashadda iPhone (maahan inay ahaato astaanta qorraxda).
Waan ogahay in inbadan oo idinka mid ah ay ogaayeen dhagartaan, laakiin waxaa jira dad badan oo aan ogayn waana kuwa adeegsadayaasha ah in kan yar la jiheeyo tip oo aan rajeynayo inuu u adeegay oo aan caawiyay.
Nuxurka maqaalka wuxuu u hogaansamayaa mabaadi'deena anshaxa tifaftirka. Si aad u soo sheegto khalad guji Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo xiro Diirada iyo Gawaarida Gawaarida ee Camera-ka iPhone
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso
3 faallooyin, ka tag taada
Ka tag faalladaada Jooji jawaabta
cinwaanka email aan la daabacin doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay la *
mail elektarooniga ah *
Waan aqbalayaa shuruudaha gaarka ah *
Ka mas'uul ah xogta: AB Internet Networks 2008 SL
Ujeedada xogta: Xakamaynta SPAM, maaraynta faallooyinka.
Isgaarsiinta xogta: Xogta looma gudbin doono dhinacyada saddexaad marka laga reebo waajibaadka sharciga ah.
Kaydinta xogta: Macluumaadka ay martigelisay Shabakadaha Occentus (EU)
Xuquuqda: Waqti kasta oo aad xadidi karto, soo ceshan karto oo tirtiri karto macluumaadkaaga.
Waxaan rabaa inaan helo warsidaha
aan qarsoodi lahayn dijo
samee 6 sano
"Waan ogahay in inbadan oo idinka mid ahi ay ogaayeen khiyaanadan, laakiin waxaa jira dad badan oo aan ogayn taasna waa kuwa adeegsadayaasha ah in tilmaantan yar la siiyo oo aan rajaynayo inay u adeegtay oo ay ka caawisay."
Dhab ahaan, inbadan oo kuwa aniga ila mid ah way garanayeen, runtiina 99% kuwa adeegsada iPhone-ka, ama ugu yaraan kuwa naga mid ah oo badanaa adeegsada kamaradda iPhone aad u badan, waan ogayn laakiin qoraal dhan looma baahna cinwaanka, Cinwaankaas ayaa jawaab u noqon lahaa: ka tagista aagga aad rabto inaad diiradda saarto; Iyo in aan lagu bilaabin adoo dhahaya kamarada iPhone-ka ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka ... waa hagaag, taas waxaan u soo uruurinay talooyin dheeraad ah
Ku jawaab anonimous
Xavi Perez dijo
Aad u faa'iido badan. Wax fikrad ah maleh !!! Merci !!!
Jawaab Xavi Perez
Gerardo TD dijo
5 cutub !!! Maxay u dheereeyaan?!?!? Waxa kaliya ee muhiimka ahi waa khadka qolka.
Jawaab Gerardo TD
Windows 10, nidaamka cusub ee ay ku shaqeyso Microsoft
IKEA Store, waa barnaamij waqti badan qaatay in la yimaado
Wararka ku jira emaylkaaga
Ka hel wararkii ugu dambeeyay ee iPhone-ga emailkaaga
Wargeys maalinle ah
Wargeys toddobaadle ah
Waan aqbalay shuruudaha sharciga
Email u dir RSS
Waxaan ka socdaa mac
Abuurista khadka tooska ah
Qalab Bilaash ah
Laga soo bilaabo Linux
Actualidad iPhone waa mid ka mid ah wabiyadaha leh taariikhda ugu dheer ee Isbaanishka ee ku saabsan wararka Apple, oo ay taageerayaan in ka badan 10 sano oo bixiya wararkii ugu dambeeyay ee Apple iyo aaladaha sida iPhone, iMac ama iPad. Waxaad ku soo diri kartaa talooyinkaaga adoo adeegsanaya foomka xiriirka del kooxda tifaftirka.
Soo hel wadahaaga
Hubi iPhone Bilaash ah
Soo dir waddooyinka
Kusoo qor wargeyskeena bilaashka ah
Ogeysiis sharci ah